Ngaphesheya-phantsi kweKayak: Indlela yoTuck xa uphezulu-phantsi kweKayak
Ukuzilibazisa kunye Nemisebenzi Kayaks
Yonke ikhamera yamanzi emhlophe iya kugxininiswa kwi-kayak ngethuba elithile ekuhambeni kwabo emsebenzini. Iingcali zifumana phantsi kwamanzi ngamanye amaxesha, ngamanye amaxesha nangenjongo. Kungenxa yesi sizathu ukuba ii-kayaker kufuneka zikwazi ukuba zenze ntoni ngokukhawuleza xa zihamba, hleze zithinte ubuso babo okanye intloko emlanjeni. Nangona kungenangokwemvelo ukukhupha xa ugxininisa kwi-kayak, oku kuhamba ngokukhawuleza-kuya kukukhokela ngamanyathelo okuthamba xa uhlaselwa phantsi ukwenzela ukuba unakho ukuphuma okanye uphinde uphume.
Ixesha elifunekayo: imizuzu emi-5
Yiba ne-Spotter eManzini:
Ngethuba lokuqala lokusebenzisa le nto kufuneka ube ne-kayaker enamava emi emanzini ecaleni kwe kayak. Ngale ndlela banokukunceda kwimeko apho ufuna uncedo olusuka kumanki.
Gcina i- kayak paddle phambi kwakho, uncike kwelinye icala uze uphawule. Abanye abantu bathanda ukugqoka iiplagi zendlebe kunye neepumgi zeempumlo xa bezama ukuqhubela phambili, ukuphuma emanzini, okanye ukuhambisa i-kayak.
Tuck Toward Kayak:
Emva kokuhlaselwa kwinqanaba lakho le-kayak, umzimba wakho uya kuxhoma ngaphantsi kwamanzi. Gcina i-paddle yakho kufuphi nomzimba wakho. Yenza intloko yakho enkundleni kwaye ufike ngaselunxwemeni. Uya kwenza oku ngokuxhomekeka phambili malunga nokuhlala ngaphandle ngaphandle kokuba uya kuhlaselwa.
Gcina iNtloko yakho ibe kufuphi neKayak njengoko Unakho:
Injongo kukuba ibe kufuphi ne-kayak njengoko unako. Oku kuya kuqinisekisa ukuba nayiphi na iitye onokuyibetha xa uhamba ngaphantsi komlambo ongaphantsi kwehla uya kutshabalalisa isigqoko sakho kunye ne-pfd yakho (ibhatyi lobomi) kwaye ungakubethi ebusweni okanye uphononise phantsi kwayo nayiphi na into.
Qinisekisa Yintoni elandelayo:
Ukusuka kwisithuba esinqumbileyo unokuba ngumanzi-uphume kwi-kayak, uqalise i-kayak , okanye u-buddy-roll. Isikhundla esinqumbileyo isigaba sokuqala ngasinye salezi zinto.
Yenza oku kunye nayo yonke impahla yakho njengoko u-tucking xa uphezulu-phantsi uya kuziva uhlukile kuye kuxhomekeke kwizinto ozigqokeyo.
Jonga ngaphantsi kwamanzi ukuze ukhululeke kwaye ulungele ukuhlaselwa.
Yonke Inqaku Lakho LikaKayak!
I-Earplugs kunye / okanye i-Noseplugs
Indlela Ukuqonda I-Kayaks Yashintsha Icandelo le-Kayaking Industry
Kayak Vs. Iinqanawa: Yiyiphi iBhakile efanelekileyo kuwe?
Indlela yokufunda nokubhala iMithamo yama-Byte